1:39 PM LeaveaComment Read More
9:06 PM LeaveaComment Read More
အင်္ဂလိပ်စာ ကနေ ဘာသာပြန်တာ သိပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြန်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ဖြစ်နိုင်ရင် အစ်ကိုအမ တို့ က ဘာသာပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်.....
တောင်းဆိုချက် အရ ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတွေဟာ တိုက်ရိုက် ရေးရင် သဘောတရား မပေါ်လွင်နိုင်တာမို့ စာသားတစ်ချို့ ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းထားပါတယ်။
Photo From all4dvd.com
There's DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, and even DVD-ROM! So what's the difference between all of these different names,
DVD-R, DVD+R, DVD+RW နဲ့DVD-RW ဆိုတာတွေ ကြားက ကွာခြားချက်ကို ရှင်းမယ် ဆိုရင် DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, တွေကနေ စလို့ DVD-ROM ဆိုတာထိ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ ဒီ မတူညီတဲ့ အမည်တွေ ကြားထဲက ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေများလဲ ??
aren't all DVDs the same? Well, it's not quite that simple. Let's first start with the most obvious difference:
အားလုံးက DVDs တွေချည်းပဲ တူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား ? မဟုတ်ပါဘူး အဲ့လောက်ထိ မလွယ်ကူပါဘူး - ပထမဆုံး မြင်လွယ် သိလွယ်မယ့် နေရာကနေ စကြည့်ပါမယ် -
some have R and some have RW. The "R" stands for readable, while the "W" stands for writeable.
DVD ထဲမှာမှ တစ်ချို့က R ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ RW ပါတယ်။ "W" ဆိုတဲ့ စာလုံးက writeable လို့ ခေါ်တဲ့ DVD ပေါ်မှာ Data တွေ ရေးသား-ဖြည့်သွင်းနိုင်သည်လို့ သဘောဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ "R" ဆိုတဲ့ ကောင်က readable လို့ ခေါ်တဲ့ DVD ပေါ်မှာ ပါတဲ့ Data တွေကိုပဲ ဖတ်ပဲဖတ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ဆောင်ကျဉ်းပါတယ်။
DVD-R, DVD-RW, DVD+R နဲ့ DVD+RW ဆိုတာတွေရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်တွေကတော့ - R ဆိုတဲ့ disc formats တွေဟာ Disc ပေါ်မှာ Data တွေကို တစ်ကြိမ်သာရေးသားရိုက်သွင်းနိုင်ပြီး - အဲလို ရေးသားရိုက်သွားပြီးသွားတာနဲ့ Disc ပေါ်မှာ ရေးသားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို readable ဆိုတဲ့ ဖတ်ယုံကလဲြွပီး - ဒီ Disc ပေါ်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖျက်ခြင်း - နောက်တစ်ဖန် အသစ်ပြန်ရိုက်ခြင်း - Data အသစ် ထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်း ဆိုတာမျိုးတွေကို သူ့တစ်သက်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်တော့မှ ထပ်မံလုပ်ဆောင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
RW discs တွေကတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်မံရိုက်သွင်းလို့လည်း ရသလို ရိုက်သွင်းပြီးသား အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ပြန်လည် ပယ်ဖျက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် RW discs တွေကို readable and writeable လို့ခေါ်တဲ့ ရေးလို့လည်း ရ ဖတ်လို့လည်းရ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ တင်စားထားတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် "R" discs တွေဟာ PCs တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား files တွေ ရွှေ့ပြောင်း သယ်ယူရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် - ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖိုင်တစ်ချို့ ပေးချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ် Data တွေကို တစ်ခါသုံး တစ်ခါရိုက် သဘောမျိုး အသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာ သင့်တော်ပါတယ်။
"RW" discs have their strength in the ability to be used many times over, which is great for routine system backups, etc.
"RW" discs ဆိုတာတွေကတော့ ပိုပြီး ကြံ့ခိုင်မှုလည်း ရှိသလို အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ဖျက်သွင်းရိုက်ထုတ် လုပ်နိုင်တာမျိုး မို့လို့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေရမယ့် system backups ဆိုတာမျိုး - စတာတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
And naturally, the RW discs are slightly more expensive than the R discs, but you'll have to decide if the trade offs are worth the money.
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ RW discs တွေဟာ R discs ထက် နဲနဲလေး ဈေးပိုကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ကိုယ့်အတွက် တကယ် အသုံးလိုသလား - တကယ် ပေးဝယ်ဖို့ရော တန်ရဲ့လား ဆိုတာ မဝယ်ယူခင်မှာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်တို့ DVD-R နဲ့ DVD+R အကြောင်းလေး ဆက်လိုက်ကြရအောင် -
As I just described above, DVD-R & DVD-RW are sister discs, the difference being one is writeable once, while the other is writeable multiple times.
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ တစ်ခုက Data တွေကို တစ်ကြိမ်ပဲ ရိုက်သွင်းနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ နောက်တစ်ခုက Data တွေကို အကြိမ်ပေါင်း မနည်း ရိုက်သွင်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ Discs ညီအစ်မ DVD-R နဲ့ DVD-RW လို သဘောပါပဲ -
The same thing is true for DVD+R & DVD+RW. So the question is, what's the difference between the plus and minus?
ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အဲ့ဒီ သဘောတရားက DVD+R နဲ့ DVD+RW မှာလည်း တူတူပါပဲ - အလွယ်ပြောရင် တစ်ခုက တစ်ကြိမ်ပဲ ရိုက်လို့ ရမယ် - နောက်တစ်ခုက ကြိမ်ဖန်များစွာ ရိုက်လို့ ရမယ်။ အဲ - ဒီလိုဆို အနှုတ်နဲ့ အပေါင်း Minus "-" နဲ့ Plus "+" ကျတော့ ဘာကွာ သွားတာတုန်း ?
In order to explain this we must takeatrip back in time.
ဒါကို ရှင်းဖို့ အတွက် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ကြောင်းပြန် ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် -
When DVDs were first being developed, there was no industry standard.
DVDs ဆိုတာတွေ ပထမဆုံး စထုတ်ခဲ့စဉ်တုန်းက လုပ်ငန်းသုံးစံသတ်မှတ်ချက် ဆိုတာတွေ မရှိခဲ့သေးပါဘူး -
Multiple companies were competing to develop what they hoped would be the dominant form of the future.
ကုမ္ပဏီတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း အနာဂတ်မှာ လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကိုသာ ယှဉ်ပြိုင် ဖန်တီးနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
DVD-R DVD+R ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အလွယ်တကူ အနှစ်ချုပ်နိုင်ပါတယ် :
* DVD-R/RW standard ဆိုတာ Pioneer ကစတင် ဖော်ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Apple နဲ့ Pioneer အဦးဆုံး အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ "minus" discs တွေဟာ Discs မျက်နှာပြင်ပေါ်က Layer တစ်ခုတည်းပေါ်မှာသာ ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ နောက် ဒီ format ကို DVD forum က support ပေးထားတယ်ဆိုပေမယ့် industry standard လို့ ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းသုံး စံသတ်မှတ်ချက်တော့ ပြည့်မှီ မလာနိုင်ပါဘူး - DVD-R/RW discs တွေဟာ "plus" format တွေထက် ဈေးသက်သာပါတယ်။
* DVD+R/RW format ကတော့ Philips, Dell, Sony, HP, Mcft ကနေ support ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ့ Discs တွေက multiple layers လို့ ခေါ်တဲ့ Layers တစ်ခုထက်မက ရေးသားနိုင်သလို - "minus" format Discs တွေထက်လည်း နဲနဲပိုကောင်းပြီး disc storage လည်း နဲနဲ ပိုများပါတယ်။ အဲလို အားသာချက်တွေကြောင့် "plus" format discs တွေက "minus" discs တွေထက် ဈေးနဲနဲ ပိုကြီးတတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ DVD+RW နောက် တစ်ခြား DVD formats တွေနဲ့ DVD-ROM ရဲ့ ကြားက ကွာခြားချက်ကို ရှင်းလင်းသွားအောင် ထပ်ပြောရရင် တစ်ခြား DVD drives တွေက Data တွေကို DVDs ထဲ ရေးလိုက်ဖျက်လိုက် ပြန်ရိုက်လိုက် လုပ်ဆောင်နေနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ DVD-ROM drive ဆိုတာတွေက DVDs တွေကို ဖတ်ယုံပဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်တော့ DVD+RW CD+RW ဆိုတာရဲ့ ကွာခြားချက်ကို "DVD" နဲ့ "CD" ဆိုတဲ့ စာလုံးတွဲ ကို ကြည့်ပြီး နားလည်ပြီး ဖြစ်လောက်ပါပြီ - CD တွေက ပျမ်းမျှ အနေနဲ့ Data ပမာဏ 700 MB ဝင်ဆံ့နေစဉ်မှာ - DVDs တွေကတော့ ပျမ်းမျှ အနေနဲ့ Data 4.7 GB ပမာဏ ဝင်ဆ့ံပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းနဲ့ ပြောရရင် CD တွေရဲက Data ပမာဏ ဝင်ဆံ့နိုင်မှု နှုန်းဟာ DVDs တွေရဲ့ 15% ရောက်ပဲ ဝင်ဆံ့နိုင်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာ CDs တွေက အနည်းငယ် ဈေးပိုသက်သာတယ် ဆိုပေမယ့် DVDs ရဲ့ အသုံးဝင် ထူးခြားချက်တွေက ပိုပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်တယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခုဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, ဆိုတာတွေ အပြင် DVD-ROM ဆိုတာတွေရဲ့ ကြားက ကွဲပြားခြားနားချက် ဆိုတာတွေကို လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ - ဘယ်ဟာကများ ကိုယ့်အတွက် ပိုသင့်တော်ပါသလဲ ?? အလွယ်ကူဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ ဘယ်ကောင်က လုပ်ငန်းခွင်သုံးအနေနဲ့ ပို သင့်တော်သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်တာပါ။ ဟိုးအရင် နှစ်တွေတုန်းကတော့ တပ်ဆင်ပြီးသား computers တွေမှာ DVD-ROM drives တွေ တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းပါဝင်လာခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ PCs တော်တော်များများမှာ burnable DVD drive လို့ ခေါ်တဲ့ ဖတ်ယုံတင် မဟုတ်ပဲ ရိုက်ပါ ရိုက်နိုင်တဲ့ DVD drive မျိုးတွေ ရှိနေကြပါပြီ။
ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတာတော့ burnable DVD drive တစ်ခု ရှိထားတာဟာ တစ်ခြား အပိုကုန်ကျ စရိတ်တွေထက် အများကြီး ပိုပြီးအကျိုးပြုပါတယ်။ သူရှိထားခြင်း အားဖြင့် Data တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပိုသိမ်းထားလို့ ရသလို DVD player နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ movies တွေသိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာမှာလည်း အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အကြံပြုချင်တာကတော့ DVD burners တွေ ဝယ်ယူတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ DVD-R, DVD+R, DVD-RW, နဲ့ DVD+RW ဆိုတဲ့ major formats တွေ အားလုံးကို support ပေးတဲ့ DVD burners မျိုးကို ရှာဖွေပါ။ အဲလို formats တွေအားလုံးကို supports ပေးတဲ့ DVD drive ဆိုတာ ဈေးပိုကြီးမှာ မှန်ပေမယ့် သူ့ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် DVD disc မျိုးစုံကို ကျွန်တော်တို့ burn လို့ ရမယ် - နောက်ပြီး industry တွေကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒါသုံးရင် ဒါလုပ်လို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကနေလည်း တားဆီးပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
1:43 AM LeaveaComment Read More
Originally Posted by tainlwar
မိသားစုများ ခင်ဗျာ....Burn ပီးသား DVD အခွေကို ပြန်ဖျက်လို့ရမလား မသိဘူး...ကျွန်တော်က ကွန်ပျုတာ ဗဟုသုတ တွေကိုလေ့လာနေဆဲ မို့ မသိလို့ ကူညီပေးကြပါဦး...ရမယ်ဆိုရင်လဲလုပ်နည်း လေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါလား ခင်ဗျာ....
Originally Posted by ငြိမ်းချမ်း
မရလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ... burnပီးသားခွေကိုသာ ထပ်ပြီးburn လို့ရတာ... ကျွန်တော်လည်းအဲဒါကို ရရင် သိချင်နေပါတယ်.. သိတဲ့သူတွရှိရင်တော ့ဝင်ဖြေကြပါလိမ့်မယ်..
ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ Burn ပီးသား DVD အခွေကို ပြန်ဖျက်လို့ ရသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တကယ်တော့ မပြည့်စုံသေးပါဘူး - ဘာကြောင့်လည်းဆို ကျွန်တော်တို့ DVD လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး Format နှစ်မျိုးရှိတာ သိထားရပါလိမ့်မယ်။ အ့ဲဒီ Format နှစ်မျိုးက "Minus" ("-") Formats လို့ ခေါ်တဲ့ ( DVD-R, DVD-RW ) ဆိုတာရယ် "Plus" ("+") Formats လို့ ခေါ်တဲ့ ( DVD+R, DVD+RW ) ဆိုတဲ့ နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ +R တို့ -R တို့ +RW တို့ -RW တို့ဆိုတာ Data တွေကို ဘယ်လိုခန့်ခွဲနိုင်မယ် ဆိုတာကို အဓိက ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo from online.tenadigitalmarket.com
နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် "Minus" ("-") Formats ဆိုကြပါစို့ - သူ့မှာ DVD-R နဲ့ DVD-RW ရှိတယ်။ အဲမှာ DVD-R ဆိုတာ write-once format ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပြောချင်တာက အဲ့အခွေက Data တွေ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရိုက်တာကိုပဲ ခွင့်ပြုတယ် - တစ်ခါရိုက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ DVD မှာ နောက်ဘယ်တော့မှ Data ထပ် Burn လို့ မရတော့ဘူး - ရိုက်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ တစ်သက်လုံး သိမ်းသွားပေတော့ ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ ကွာခြားသွားတဲ့ DVD-RW ဆိုတာကကျတော့ Data တွေကို တစ်ကြိမ်ထက်မက ရိုက်နိုင်တယ် အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ရိုက်နိုင်တယ် - ရိုက်ပြီးသားလည်း ပြန်ဖျက် ပြန်ရိုက်လို့ ရတယ် - ဒါကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခဏခဏ ပြန်ရိုက်လို့ ရတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသလိုမျိုး ခဏခဏ ရိုက်လိုက် ဖျက်လိုက် လုပ်လို့တော့ မကောင်းပါဘူး - သူလည်း ပစ္စည်းပဲမို့ ပျက်တာကတော့ ပျက်နိုင်တာပါပဲ -
Photo from memorex.com
နောက်တစ်ခုက "Plus" ("+") Formats လို့ ခေါ်တဲ့ ( DVD+R, DVD+RW ) အကြောင်း - သူ့အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆို နည်းနည်းတော့ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ DVD+R ဆိုတာ DVD-R လိုမျိုးပဲ ( 4.7GB ) data storage capacity ရှိပြီး write-once format ပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ DVD ဖြစ်တာချင်း တူပေမယ့် သူ့မှာ DVD players တော်တော်များများနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ ပြင်ဆင်ထား ပါတယ်။ နောက် DVD+RW မှာကတော့ DVD-RW နဲ့ မတူတော့ပဲ စွမ်းဆောင်ရည်လေးတွေ ဒီ့ထက် နည်းနည်းပိုလာပါတယ်။ ဆိုလိုတာ DVD+RW ခွေနဲ့ ရိုက်ရင် Data တွေကို ပိုမြန်မြန် ရိုက်လို့ ရမယ်။ နောက် Disk ထဲမှာ ထည့်မယ့် Data တွေကို အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ Desktop ပေါ်ကနေ ဖိုင်တွေ drag-and-drop လုပ်လို့ ရမယ် - internal linking ကောင်းမယ် ( internal linking ဆိုတာ Technical အရ ပြောတာပါ - အရေးသိပ်မကြီးပါဘူး ) - အဲလို ကျွန်တော် ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကြောင့် ( DVD-R, DVD-RW ) တွေက ( DVD+R, DVD+RW ) ထက်စာရင် ဈေးကွက်မှာ ဈေးပိုသက်သာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ( DVD+R, DVD+RW ) တွေကတော့ ဈေးနည်းနည်းပိုကြီးတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို ဘယ် DVD က ခဏခဏ ဖျက်လို့ ရတယ် - ဘယ်ဟာကတော့ ဖျက်လို့ မရဘူး - DVD ချင်းတူပေမယ့် ဘာတွေက ဘယ်လိုကွာခြားတယ် ဆိုတာ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
1:04 AM LeaveaComment Read More
ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးမှာ ကျွန်တော် စိတ်အဝင်စားမိဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို ပြပါဆိုရင် Hard Disk လို့ ခေါ်တဲ့ နေ့စဉ် သုံးစွဲနေကျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Data တွေ သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ညွှန်ပြချင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာကို စသုံးခဲ့စဉ် တည်းက ဒီ Hard Disk အကြောင်းကို လက်လှမ်းမှီသမျှ ဖတ်ခဲ့လေ့လာခဲ့တာ ခုထိလည်း လေ့လာလို့ မကုန်နိုင်သေးဘူး - ဖတ်လို့လည်း မဆုံးနိုင်သေးဘူး - Hard Disk အကြောင်းလို့ ဆိုလိုက်တော့ ခေါင်းစဉ်က အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်သွားပါတယ် - တကယ်တော့ ကျွန်တော် အဲလောက်ကြီးထိလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလေ့လာနိုင်ပါဘူး - Hard Disk အကြောင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကမှ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာ Hard Disk Failure လို့ ခေါ်တဲ့ Hard Disk တစ်ခု ပျက်စီးရခြင်း Data ဆုံးရံှုးရခြင်းရဲ့ အဓိက ဇစ်မြစ် အခြေခံ အကြောင်းတရား တွေကိုပါ။
ဘာကြောင့် ဒီအကြောင်းတရားကို ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာနဲ့ အတူ နှစ်အတော် များများ ဖြတ်သန်း ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကျွန်တော် အပါအဝင် ကျွန်တော့် အသိမိတ်ဆွေ - အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်း - မိသားစု စသဖြင့် ကွန်ပြူတာနဲ့ လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ သူတိုင်းနီးပါး အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်ကြရတာ Hard Disk Failure လို့ ခေါ်တဲ့ Hard Disk တစ်ခု ပျက်စီးရခြင်း Data ဆုံးရံှုးရခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့်ပါပဲ။ အဲလို Hard Disk Failure ဆိုတာ ဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရတယ်။ တစ်ချို့က Hard Disk ထဲမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးလို့ မရတဲ့ Data တွေ သိမ်းဆည်းကြတယ် - တစ်ချို့ကျတော့ လူအများနဲ့ တွဲဖက် လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ သတင်းအချက်အလက် မှတ်တမ်းတွေ - နောက်ဆုံး ကွန်ပြူတာကို ဖျော်ဖြေရေးလောက် သုံးတဲ့ သူဆိုရင်တောင် အထဲမှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် စုဆောင်းထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ - VCD လေးတွေ ဆိုတာ ရှိကြမှာပဲ - ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ကွန်ပြူတာ သုံးသုံး Hard Disk Failure ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် အားလုံး ဆုံးရံှုးကြရတာပါပဲ - Hard Disk Failure ဖြစ်ရင် Recovery ပြန်လုပ်လို့ ရတယ် - ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ Services တွေ ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Data တွေ အားလုံး ပြန်ရနိုင်မယ် မရနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ ကိုယ့် Hard Disk က ဘယ်လောက်ကြီးထိ ထိခိုက်ပျက်စီး သွားလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး မသေချာနိုင်ပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုပြီး ထိရောက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း - Hard Disk ပျက်ရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာထက် Hard Disk မပျက်ခင် ကတည်းက ကိုယ့် Data တွေ မဆုံးရံှုးရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မှု လုပ်မလဲ - ဘယ်လို ပြင်ဆင်မှုတွေ ထားမလဲ ဒါကို ကျွန်တော် သိသလောက်လေး နည်းနည်း လက်ဆင့်ကမ်းချင်မိပါတယ်။
မိမိ Hard Drive ရှိ ပြဿနာများအား ခန့်မှန်းစစ်ဆေးခြင်း
ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေး မလုပ်ဆောင်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Hard Drive က လက်တလော အခြေအနေမှာ ဘယ်လို အနေအထားမျိုး ရှိနေသလဲ - ဆိုလိုတာ Normal ပဲလား - ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ ရပ်တွေ ပြနေလား - ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး လေ့လာထားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို သိထားမှ အခြေအနေ တော်တော်ဆိုးနေပြီလား - ပြင်ဆင်လို့ ရနိုင်သေးလား - အစားထိုးသင့်ပြီလားဆိုတာ ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ရမှာပါ။
အဆင့် ( ၁ ) - Hard Disk Errors များအား စစ်ဆေးခြင်း
အခုနောက်ပိုင်း လူတော်တော်များများလည်း အတည်ပြု အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်တဲ့ Windows တော်တော်များများမှာ Chkdsk.exe လို့ခေါ်တဲ့ Utility တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ သူက ဘာကောင်းလဲ ဆိုရင် ကိုယ့် Hard Disk ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ Bad Sectors တွေကို စစ်ဆေးပေးတာပါ။ Bad Sectors လို့ ကျွန်တော်သုံးလိုက်တော့ စပြီးလေ့လာသူ တစ်ယောက်အတွက် နားလည်ရ နဲနဲ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Bad Sectors အကြောင်းရေးချင်တာ မဟုတ်လို့ ဒီနေရာမှာ အကုန်လုံး အသေးစိတ် မဖော်ပြနိုင်ပေမယ့် နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် Bad Sectors ဆိုတာ Hard Disk မျက်နှာပြင်ပေါ်က OS ကနေပြီး Access လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ Sector ( အစိတ်အပိုင်း ဧရိယာ ) တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
Hard Drive ပေါ်မှာ Bad Sectors တွေတည်ရှိလာရင် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ - ကိုယ့် Hard Disk က အလုပ်လုပ်တာ နှေးလာမယ် - ဆိုလိုတာ Windows အတက်မှာ ဖြစ်ဖြစ် - Applications တစ်ခုခု ခေါ်သုံးရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် စက်မှာ ဆင်ထားတဲ့ Hardware Performance နဲ့ မညီလောက်အောင်ကို နှေးကွေး လေးလံလာမယ် - အဲတာကို ကိုယ်က မသိပဲ ပေသုံးရင် နောက်ဆို Shortcut တစ်ခုခု ခေါ်သုံးလိုက်တာနဲ့ စက်ကြီးက Hang သွားပြီး Restart တွေ ဘာတွေ ကျသွားမယ် - Restart ကျပြီး ပြန်တက်ချိန်မှာ စက်က တော်ယုံနဲ့ Windows တက်မလာတော့ဘူး - Boot Screen မှာပဲ ကလည်ကလည်နဲ့ လည်လိုက် Restart ပြန်ကျလိုက် - ဒါမှမဟုတ် Boot Screen မှာပဲ လည်ပြီး အထဲကို မဝင်တော့ဘူး - ကံကောင်းပြီး အထဲ ရောက်သွားပြန်ရင်လည်း စက်က Hang နေပြီး ဘာမှချက်ချင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲ တော်တော်ကြာကြာ စောင့်နေရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဲ့ထက် ဆိုးသွားရင် Hard Disk ကိုလုံးဝ Detect မလုပ်တော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်။ Boot ထဲကို ဝင်ကြည့်ရင် ကိုယ့် HD ကိုလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး - ဒါတွေက Bad Sectors တွေ ကိုယ့် Hard Drive ပေါ်မှာ တည်ရှိတာ များလာရင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိတဲ့ ပြဿနာ ရပ်တွေပါ - ဒီလိုဖြစ်ရင် HD မကောင်းတာပါလို့ ကျိန်းသေပေါက်ပြောလို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ခု ဖော်ပြခဲ့တာတွေက Bad Sectors တွေတည်ရှိလာရင် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေထဲက တစ်ချို့ တစ်ဝက်ပါပဲ။
အခု ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ အခြေအနေကို ကိုယ်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ - ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့ ညိှကောင်းလည်း ညိှနေနိုင်မယ် - မညှိသေးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမယ် - ဒါပေမယ့် ညှိသည်ဖြစ်စေ - မညှိသည် ဖြစ်စေ ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုပြီး ထိရောက် တာမို့လို့ Chkdsk ကို လုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါပြီ။ Chkdsk ကို Command Line ကနေ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်နိုင်ပြီး အဲ့ထက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ Windows Explorer ကိုဖွင့် Windows Partitions အပါအဝင် ကိုယ်အများဆုံး Data အထုတ်အသွင်း လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Hard Disk Partition တစ်ခုခုကို Right click ထောက် - အဲနောက်မှာမှ Properties ကိုသွား - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပေါ်လာရင် Tools tab ကိုဝင် Error checking အောက်က “Check Now” button ကိုနှိပ် -
ဒီလိုဆို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နောက် Box တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့မှာ “Scan for and attempt recovery of bad sectors” ကို ရွေးပေးပြီး Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ Check Disk လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခု သိထားရမှာက Windows Partitions ကို Check Disk လုပ်ဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ Windows ထဲမှာ လုပ်ဆောင်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပဲ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်စက်ကို Restart ပေးတဲ့ အချိန်ကျမှ Check Disk လုပ်ငန်းစဉ်ကို Windows ကနေ လုပ်ဆောင်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို လုပ်ဆောင်သွားမယ် ဆိုတာကို သူက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသိပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ( ၂ ) - မိမိ Hard Disk ၏ သံစဉ်များအား လေ့လာခြင်း
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ ကို LaMike အကူအညီတောင်းခဲ့ဖူးလို့ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါဝင်ရောက် အကြံပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခု ဒီနေရာမှာလည်း အဲ့မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်း တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကွန်ပြူတာ သုံးနေရင်းနဲ့ CPU ပုံးထဲကနေ ထူးထူးဆန်းဆန်း အသံတွေ ကြားခဲ့ရဖူးပါလား - ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေလဲ ဆိုတာ ဒီနေရာကနေ download ချပြီး နားထောင်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Download ချပြီး နားမထောင်ချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ဒီနေရာမှာ Hard Drive ကနေ ထွက်လာတတ်တဲ့ အသံပုံစံတူတွေကို နားထောင်နိုင်ပြီး အဲ့ထဲက ဘယ်အသံက ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ယေဘုယျ အားဖြင့် သုံးသပ်ပေးတဲ့ Site တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ သူပြထားတဲ့ Buttons လေးတွေကို Mouse နဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပွတ်ရွှေ့လိုက်ယုံပါပဲ -
အဲလို လုပ်လိုက်ရင် buttons တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အသံတွေကို သူထုတ်ပြပြီး ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ သူက ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် Hard Drive က ထူးထူးဆန်းဆန်း အသံတွေနဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို လေ့လာဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုက Data Cent ပါ။ အဲ့ဒီမှာ Hard Drive Manufactures အသီးသီးက ( Western Digital - Seagate - Maxtor - Samsung - Hitachi/IBM - Toshiba - Fujitsu - Quantum ) ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Hard Drive အမျိုးမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ဆူညံသံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Data Recovery လုပ်နိုင်ဖို့ ဘာသံက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိပါတယ်။ ခုလိုမျိုး Hard Drive က ထူးထူးဆန်းဆန်း အသံတွေ ကြားနေရပြီ ဆိုရင် ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး - ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာ အနှေးနဲ့ အမြန် Hard Drive Fail ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အသိပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကံသေကံမ ဖြစ်ကို ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဖူးသလောက် အဲလို အသံ ကြားနေရပေမယ့် လနဲ့ ချီပြီး အသုံးခံနေသေးတဲ့ Hard Drive တွေလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေ တွက်ချက်ထားနိုင်တာမျိုး မဟုတ်လို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာက Data Backup လုပ်ထားဖို့ပါ။ Backup လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သိပ် မရင်းနှီးဘူး ဆိုရင် External Hard Drive တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူ/ဌားပြီး ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်မနေ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို ပြောင်းပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Hard Drive အသစ်တစ်ခု လဲလှယ် အသုံးပြုနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်ဖို့ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူများဆီက Hard Drive ဌားမှပဲ အဆင်ပြေတော့မှာလားလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အဲလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး - အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို ကြိုတင် Backup လုပ်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အမြောက်အများရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အင်တာနက်အား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် - လွယ်ကူလေ့လာ Backup နည်းပညာ နဲ့ Windows7တွင် Step by Step Backup ပြုလုပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကွဲပြားသွားတဲ့ Backup လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို Backup Plan ထားရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ( ၃ ) - ထိန်းသိမ်းမှု မလွန်ကဲပါစေနှင့်
Hard Disk ကို ဂရုစိုက်ရမယ် ဆိုတာ သိပြီ - အခု ဒီစာကို မဖတ်ဖူးခင်တည်းကလည်း Hard Disk ဆိုတာ ဂရုတစိုက် အသုံးပြုရမှန်းကောင်းမှန်း တော်တော်များများ သိနားလည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တစ်ချို့ သူတွေက လိုအပ်တာထက် ပိုလွန်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုမျိုးကို ပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း မကောင်းပါဘူး - တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုသလို Hard Disk တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိတဲ့ Errors တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိနားလည်ထားပြီးလို့/တစ်ချို့လည်း အတွေ့အကြုံရှိလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ဂရုစိုက်ကြတဲ့ နေရာမှာ လိုအပ်တာထပ် ပိုမိုတဲ့ ဂရုစိုက်မှုမျိုးက Hard Disk တစ်ခုကို ဂရုတစိုက် အသုံးပြုပါတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရသလို နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး အနေနဲ့ Hard Drive တစ်ခုရဲ့ Performance ကိုပါ ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာ Hard Drive တစ်ခုကို ဂရုတစိုက် အသုံးပြုတယ် အမည်ခံပြီး Utility ပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ ခဏခဏ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးပြောင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ - လူကြိုက်များ/ဈေးကြီး ပေးရတိုင်း ကိုယ့်စက်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ Software ကောင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပုံမှန် အသုံးပြုသင့်တာ Free လည်းရပြီး စွမ်းဆောင်ရည်လည်း ပြည့်ဝတဲ့ CCleaner တို့ Defraggler တို့ ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက ပေါ့လည်း ပေါ့ပါးသလို အမှန်တကယ်လည်း လုံလောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Free Hard Disk Monitoring Utility တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Disk Checkup ပါ။ သူကလည်း Hard Disk မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ သူက ဘာတွေကို စစ်ဆေးပေးလဲ ဆိုရင် ကိုယ့် Hard Disk ရဲ့ Temperature - နောက် read နဲ့ write error rate စတာတွေကို စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ အဲ့လို စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာ သူစံသတ်မှတ် တိုင်းတာထားတဲ့ တန်ဖိုးတွေက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အနေအထား/ အခြေအနေ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲလို အသိပေးခြင်း အားဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့/ကျရောက်လာနိုင်တဲ့ Hisk Failure ဆိုတဲ့ အန္တရာယ်ကို ကျွန်တော်တို့ အထိုက်လျောက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Disk Checkup ဟာ Personal Use အတွက် Free ပေးထားပြီး Company license ကတော့ US$15.00 per license ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ( ၄ ) - မှတ်သားထားသင့်သော အကြောင်းအရာများ
Hard Drive ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီလောက်နဲ့ ပြည့်စုံပြီလား ဆိုရင်တော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံသေးတာ သေချာပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျမ်းတစ်စောင်လိုကို ရေးချင်ပါသေးတယ် - ဒါပေမယ့် အဲ့လောက်ကြီးထိလည်း ကျွန်တော် မစွမ်းနိုင်သေးပါဘူး - ဒါကြောင့် မှတ်သားထားသင့်သော အကြောင်းအရာများကို ထပ်ဖြည့်ပြီး ဒီအကြောင်းအရာကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ အကြောင်းကတော့ SeaTools ဆိုတဲ့ Hard Drive စစ်ဆေးရေး Free diagnostic tool တစ်ခု နဲ့ တစ်ခြား အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ပါ။ ဒီ Tool လေးတွေဟာ Seagate ကနေ ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး Seagate မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား Disk Drives တွေအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အသုံးပြုဖို့ အတွက်ကတော့ ကျွန်တော် ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Link ကနေ သွားရောက်ပြီး Bootable CD ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ SeaTools for DOS ကနေ ISO image ကို ရယူရပါမယ်။ အဲ့နောက်မှာ ISO image ကို အခွေရိုက်ပြီး Drive ကနေ Boot တက်လိုက်ပါ။ အဲ့နောက်မှာ License agreement တွေကို Accept ပေးပြီး Full scan လုပ်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့် Hard Drive မှာ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေတာ တွေ့ပြီ ဆိုရင် Operation အဆုံးမှာ ဖြစ်စေ - Disk Scan ကို ရပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်စေ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
သူ့လိုပဲ တစ်ခြား Computer vendors တွေ / Hard Disk manufactures ( Samsung, Hitachi, Toshiba (Fujitsu), Western Digital, Lenovo, Dell, စသဖြင့် ) တွေကလည်း သူ့ Hard Drives Brand တွေ အတွက် Diagnostic tools တွေ ထုတ်ပေးပါ သေးတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ မကြာခဏ ဆိုသလို System Hangs တာမျိုး - Boot တက်ဖို့ ခက်နေတာမျိုး တွေ ဖြစ်လာရင် ဒီ ဖော်ပြပါ Tools တွေကို သုံးပြီး ခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာဟာ Hard Drive နဲ့ ပတ်သတ် ဆက်စပ်နေလား ဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိပြုရမှာက ကျွန်တော် ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဟာ စစ်ဆေးရေး သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် Hard Drive ထဲက Data တွေ လုံခြုံဖို့ ဆိုတာ အကောင်းဆုံးကတော့ Regular Backups လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နည်းထက် ပိုပြီး ကောင်းတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။
Data ပျက်စီး ဆုံးရံှုးမှု ကင်းစွာနဲ့ အေးချမ်းသာယာသော အနာဂတ်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ -
2:34 AM LeaveaComment Read More
ကျွန်တော်ဗျာ သိချင်တာလေးတခုရှိလို့ပါ .. PC တွေမှာ restart button ပါပြီး Laptop နဲ့ Notebook ကွန်ပျူတာတွေမှာ ဘာဖြစ်လို့ restart button မပါကြတာလဲခင်ဗျာ..ပိတ်တာလဲ ဒီခလုတ် restart လုပ်ရင်လဲ ဒီခလုတ် ၁ ခုကိုဘဲနှိပ်နေရတာ ဘာမှကွန်ပျူတာကိုမထိခိုက်ဘူးလားခင်ဗျာ..ဘယ်လိုအကျိုး ကျေးဇူးတွေ ၊ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ (ကောင်း/ဆိုး)ဖြစ်တယ် ဆိုတာသိကြရင် ပြောပြပေးကြပါ အုံးခင်ဗျာ...
Laptops တွေ ဆိုတာဟာ တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးချင်တဲ့ သူတွေ - စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ - ရုံးသုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာတွေ လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေ အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ဆောင်လှုပ်ရှားနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ မျိုးပါ။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ button တွေကိုပါ တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင် နှစ်ခုကို တစ်ခုပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတာ မို့လို့ PC တွေမှာ restart button ပါပြီး Laptop နဲ့ Notebook ကွန်ပျူတာတွေမှာ restart button မပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်တာလဲ ဒီခလုတ် restart လုပ်ရင်လဲ ဒီခလုတ် ၁ ခုကိုဘဲနှိပ်နေရတာ ဘာမှကွန်ပျူတာ ကိုမထိခိုက်ဘူးလား ... ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ဒီအောက်က အကြောင်းအရာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ရင် နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Laptops တွေဟာ desktop တွေရဲ့ ကြီးကြီးမားမား ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျုံ့နိုင်သမျှ ကျုံ့အောင် ချုံ့ထားတာကလွဲရင် desktop တွေလိုမျိုး ပဲ စက်ပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းမှုပိုင်း ဆိုင်ရာ အခြေခံအားဖြင့် အားလုံးလိုလို ဆင်တူပြီး desktop တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိတဲ့ installed လုပ်ထားတဲ့ programs ဆိုင်ရာ errors မျိုး - Operating Systems ဆိုင်ရာ errors မျိုးတွေလည်း တစ်ပုံစံတည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Desktop တွေမှာ ဖြစ်လေ့ ရှိသလိုမျိုး စက်က ဘာမှ လုပ်မရတော့ပဲ freeze ဖြစ်သွားတာ မျိုးတွေလည်း တစ်ပုံစံတည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ Desktop computers တွေအတွက်တော့ တကယ်လို့ system freezes ဖြစ်သွားချိန်မှာ ပုံမှန်အတိုင်း reset button နှိပ်ပြီး ပိတ်ချလိုက်လို့ ရပေမယ့် Laptops တွေမှာတော့ System ကို reboot ပေးဖို့ရာ reset button ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကွန်ပြူတာ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြောရရင် reboot ပေးတဲ့ နည်းလမ်း အမျိုးအစား ( ၂ ) မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ( ၂ ) မျိုးကတော့ Soft reboot လို့ ခေါ်တဲ့ ( software-based ) Reboot လုပ်တဲ့နည်း ( ဒီနည်းဟာ System မှာ Run နေတဲ့ Process အားလုံးကို စနစ်တကျ ပိတ်စေတာမို့လို့ အသင့်တော်ဆုံးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ) နဲ့ Hard reboot လို့ ခေါ်တဲ့ ( hardware-based ) Reboot လုပ်တဲ့ နည်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ( ၁ )
Soft reboot ကို လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင် ဘယ် OS ကို installed လုပ်ထားလဲ ဆိုတာ ပေါ်မူတည်ပြီး Steps တွေက ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ OS platform ပေါ် မူတည်ပြီး reboot process တွေက သူ့နည်းနဲ့ သူ မတူညီ ကြလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကို စိုင်းနေဇင်က Windows ကိုပဲ သုံးတယ်လို့ ယူဆလို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Windows နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Soft reboot လုပ်ဆောင်နည်း နဲ့ Hard reboot လုပ်ဆောင်နည်းကိုပဲ ဦးစားပေး ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။ Hard reboot လုပ်ဆောင်နည်းကိုတော့ အဆင့် ( ၃ ) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆင့် ( ၂ )
Windows XP မှာ Soft reboot ပေးမယ် ဆိုရင် 'Start' Menu ကနေတစ်ဆင့် 'Turn off Computer' ကို ရွေးပေးပြီး 'Restart' option ကို click ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows7နဲ့ Vista မှာတော့ 'Turn off Computer' မခံထားပါဘူး တိုက်ရိုက် 'Start' Menu ကနေတစ်ဆင့် Restart ဒါမှမဟုတ် Shut Down ရွေးသွားလို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး အနေနဲ့ CTRL, ALT နဲ့ Del keys တွေကို ပေါင်းနှိပ်ပြီး Windows XP မှာဆိုရင် Task Manager window ကနေ တစ်ဆင့် 'Shutdown' လုပ်မှာလား 'Restart' လုပ်မှာလား ဆိုတာ ရွေးပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ဘယ် OS Platform မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထက်ဖော်ပြပါ Soft reboot လုပ်တဲ့နည်းက ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို Reboot လုပ်ဖို့ အတွက် ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ Soft reboot လုပ်တဲ့နည်းကို သုံးပြီး ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို Reboot ပေးရင် Operating System components တွေကို ထိခိုက်စေမယ့် အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်လို့ပါ။ ဒီ Soft reboot လုပ်ဆောင်နည်းက Step by Step သွားရင် အချိန်နည်းနည်း ကြာပေမယ့် တကယ်တမ်း System တစ်ခုလုံးမှာ Run နေတဲ့ processes အားလုံးကို စနစ်တကျ ပိတ်စေတာမို့လို့ ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
အဆင့် ( ၃ )
ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ System freeze ဖြစ်ပြီး Operating System-based restart လို့ ခေါ်တဲ့ Soft reboot နည်းက သုံးမရတဲ့ အခြေအနေ မျိုးနဲ့လည်း ကြုံတတ်ပါသေးတယ်။ အဲလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Soft reboot အစား Hard reboot နည်းကို သုံးရပါပြီ။ Laptop မှာရှိတဲ့ power button ကို ၁၀ စက္ကန့်လောက် အသာလေးဖိထားလိုက်ပါ။ သူ့ဘာသာသူ Turn off ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင် ချက်ချင်း ပြန်မဖွင့်သေးဘဲ နောက်ထပ် ၁၀ စက္ကန့်လောက် စောင့်ပြီးတော့မှ power button ကနေတစ်ဆင့် Laptop ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ( ၄ )
တစ်ခါတစ်လေမှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် Soft reboot ရော Hard reboot ရော လုပ်မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်း ကြုံတတ်ပါသေးတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် နောက်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ power source ကိုဖြတ်တောက်တဲ့ နည်းပါ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောရရင်တော့ ပလပ်ခေါင်း ဆွဲဖြုတ်လို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်လည်း Battery ကို ဖြုတ်တဲ့ နည်းလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ Battery ကို ဘယ်လိုဖြုတ်ရမှာလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ် laptop ဝယ်တုန်းက ရလာတဲ့ documents တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး Battery ကို ဘယ်လို remove လုပ်ရမယ် ဆိုတာ လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Laptop brand တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက လုပ်ဆောင်ပုံချင်း မတူပါဘူး။
အနှစ်ချုပ်ရရင် Hard reboot လုပ်တဲ့နည်းက မတတ်သာတဲ့ အချိန်ကျမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ဒီနည်းကို သုံးတဲ့ အခါ System တစ်ခုလုံးမှာ Run နေတဲ့ processes အားလုံးက စနစ်တကျ အပိတ်ခံရတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Operating System components errors တွေ အများကြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် စက်အသုံးကြမ်းရင် ကြမ်းသလို maintenance မလုပ်ရင် မလုပ်သလို Windows ထဲကို ပြန်ဝင်လို့ မရတော့တာ - NTLDR missing ဖြစ်တာ - Bootmgr missing ဖြစ်တာ - Loading မှာပဲ ရပ်ပြီး Windows ထဲကို ဆက်မဝင်နိုင်တော့တာ စသဖြင့် မျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Hard reboot ပေးတိုင်း အဲလို Error ဖြစ်နိုင်သလား ?? အဲတာကတော့ အမြဲတမ်း Hard reboot ပေးနေရတာ မျိုးမဟုတ်ရင် တော်ယုံတန်ယုံ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အားရင်အားသလို စက်လေးကို Defragment လေး လုပ်ပေးမယ်။ မလိုအပ်တဲ့ files တွေကို ပုံမှန်လေး ရှင်းပေးမယ် Hard disk တွေကို ပုံမှန် Check disk ပေးထားမယ် ဆိုရင် အဲလို Error မျိုးတွေက ဖြစ်ခဲပါတယ်။
အဓိကကတော့ စက်ကို ရိုရိုသေသေ သုံးဖို့ပါ။ ကိုစိုင်းနေဇင် မေးထားတဲ့ အမေးအတွက် ဒီလောက်ဆို ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
3:59 AM LeaveaComment Read More